आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२८ वैशाख २०७९ बुधबार, ११ मे २०२२) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२८ वैशाख २०७९ बुधबार, ११ मे २०२२)
२८ बैशाख २०७९, बुधबार ००:३३
श्रीशाके १९४४ नेपाल सं. ११४२ नलनामक संवत्सर वसन्त ऋतु वि.सं. २०७९ वैशाख २८ गते तद्अनुसार सन् २०२२ मे ११ तारिख बुधबार वैशाख शुक्लपक्षको दशमी तिथि पूर्वफाल्गुणी नक्षत्र व्याघात योग वणि करण आनन्दादिमा स्थिर योग चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः२० मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४२ बजे हुनेछ । राष्ट्रिय महिला ज्योतिष संघ स्थापना दिवस ।
मेष – प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । मित्रभाव वृद्धि होला । रोकिएका घरेलु कामकाज बिस्तारै बन्नेछन् । महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । आजको दिन दोधारको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पुरानो रोगले पनि सताउन सक्छ । मिठो भोजन प्राप्त होला ।
वृष – भागदौड बढ्नेछ । कठोर परिश्रमले सफलता प्राप्त हुनेछ, तर अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहन सक्छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । धनलाभ हुनेछ, समृद्धि बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । परिवारिक सुख बढ्नेछ । उत्साह बढ्नेछ ।
मिथुन – समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । समयबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिनु बेस हुनेछ । आजको दिन कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय र ठुलो रकमको लगानीमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला ।
कर्कट – आजको दिन रमाइलोसँग बित्ला । धन, मान, सुख र समृद्धि बढ्नेछन् । रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
सिंह – शुभ काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही असमझदारी बढ्न सक्छ । मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । बौद्धिक जमातलाई आकर्षित गर्ने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । काममा आलस्य जाग्ने र खर्चको मात्रा बढ्ने पनि देखिन्छ । कर्मचारीलाई हाकिमको साथ मिल्नेछ । कर्ममा रुचि र आरोग्यता वृद्धि होला ।
कन्या – वार्तामा ध्यान राख्नुपर्नेछ । धन मान महत्वमा कमी आउनेछैन । जटिल काम सम्पादन हुनाले पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने चिताएको काम समेत सम्पादन हुनेछ । पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाइनेछ । आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ ।
तुला – शुभ र भाग्यबर्द्धक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु बेस होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् भने ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ । आयमा वृद्धि हुनेछ । योजना र बजेट बनाई काम गर्नु हितकर हुनेछ ।
वृश्चिक – मान महत्व र बर्चश्व बढ्नेछ । मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ । शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । नचिताएको ठाउबाट धन आर्जन हुनाले मन हर्षित होला । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । सुख सुविधाको वस्तु किन्नुहुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य बेस होला ।
धनु – आजको दिनआर्थिक कारोबार गर्दा निकै नै सजगता अपनाउनुहोला । चोरी तथा ठगीबाट बच्न सचेत रहनुहोला । सामाजिक क्षेत्रमा भने नेतृत्व हातलागी हुनेछ। कामले धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । सुख सफलता बढ्नेछ । उधारो लगाइएको धन पनि उठ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । सन्तानसुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर – नियमकानूनले साथ दिनेछ । आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउन सकिनेछ । भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित नहोला ।
कुम्भ – कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र आर्थिक विकाससित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य पनि बन्नेछ । मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन(अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति होला । आज सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला ।
मीन – आफन्तको साथ मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा अलि दुःख पाइएला । दुर्गमस्थान र टाढाको यात्रा सम्भावना छ तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । सुख सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् ।